ACCESS နှင့် Irdeto မှအလွှာလုံခြုံမှုကြောင့်ကားအငှား ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အချက်အလက်ယခုလုံခြုံပြီ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » မော်တော်ကား-in ACCESS နှင့် Irdeto ထံမှ Multi-Layer Security မှန်ဆောင်မှုများနှင့်ဒေတာများ Now ကိုကို Safe ကျေးဇူးတင်ပါသည်
OEMs နှင့်အဆင့် 1 ရဲ့ယခုအပြည့်အဝစားသုံးသူများအတွက်လုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံကပေး, ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲဆက်သွယ်မှုလက်ခံနိုင်ပါတယ်
တိုကျို, ဂျပန်, 8 ဇန်နဝါရီလ 2019 - ACCESS CO ။ , , LTD နှင့် Irdeto In-ကားတစ်စီးအချက်အလက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစောငျ့ရှောကျဖို့ ပူးပေါင်း. နေကြသည်။ ဆက်သွယ်မှုန်ဆောင်မှုအချက်အချာဖြစ်လာမှမော်တော်ယာဉ်များ enabled သိရသည်။ သို့သော်ပွင့်လင်းပတ်ဝန်းကျင်သို့ကားကိုလှည့်မှာလည်းအကြောင်းအရာခိုးကူးကနေဒေတာတွေကိုခိုးယူအထိတိုးမြှင့်လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်, In-မော်တော်ယာဉ်ဖျော်ဖြေရေးစနစ်အားတိုက်ခိုက်ရန်ဖွင့်လှစ်ယာဉ်၏ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ rendering အခြားချိတ်ဆက်အစိတ်အပိုင်းများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။
မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအပေါ်ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုတိုးနှင့်တကွ, မိတ်ဖက်, ထိုကဲ့သို့သော Telematics ECUs အဖြစ်ချိတ်ဆက်မော်တော်ယာဉ်ဂေဟစနစ်အတွက်မော်တော်ယာဉ်မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖျော်ဖြေရေးအကြောင်းအရာများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပါအဝင် In-ကားတစ်စီးန်ဆောင်မှုများ, ကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်ရေးနှင့် Endpoints များအတွက်လုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်မှာတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုမူတည်ပြီးပါလိမ့်မယ် အဆိုပါ In-မော်တော်ယာဉ်ဖျော်ဖြေရေးစနစ်နှင့် V2I လမ်းဘေးယူနစ်။ ဤသည် Multi-အလွှာလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာအရှင်စားသုံးသူများအတွက်လုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံကပေး, မော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူအားနည်းလင့်များဖော်ထုတ်ရန်နှင့်မည်သည့်တိုက်ခိုက်ပိတ်ဆို့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
"ဒီနေ့ကျနော်တို့ယာဉ်အတွင်း In-ကားတစ်စီးကို Wi-Fi နှင့်ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေသုံးပြီးအများအပြားန်ဆောင်မှုကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ အပူဆုံးဒေသများ၏တဦးတည်းအသီးအသီးလမ်းခရီးဘို့ချိန်ညှိကျနော်တို့အိမ်မှာရှိတူန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်ဖို့ဖျော်ဖြေရေးအတွေ့အကြုံ, တိုးမြှင့်ထားသည်။ ကနေ - အဲဒီလိုလုပ်ဖို့, ငါတို့အိမ်မှာငါတို့သည်တူညီသောအကြောင်းအရာပူဇော်ရန်လိုအပ်ပါတယ် ဟောလိဝုဒ် လွတ်လပ်သောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်ဂိမ်းများမှ Blockbuster ။ ဒီအကြောင်းအရာအားလုံးသည်မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်နှင့်အပြည့်အဝကာကွယ်ထားသည်ရန်လိုအပ်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ Irdeto နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်အထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်အားကစားနှင့်ပရီမီယံကဗီဒီယိုဟာယပူဇော်သက္ကာအဖြစ်မြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးကအကြောင်းအရာအဘို့, စိတ်ချလက်ချဒီစိန်ခေါ်မှုဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွ "ဟုဒေါက်တာ Neal Foster, Access ဥရောပမှာ CEO ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့သည်။
Irdeto ဟက်ကာများအသုံးပြုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့တစ်ဦး In-depth ကိုနားလည်မှုအဖြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့နှင့်ရရှိလာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသက်ရောက်မှုဖို့ချိတ်ဆက်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏လွယ်ကူစွာထိခိုက်ရှိပါတယ်။ ချိတ်ဆက်ယာဉ်များလုံခြုံရေးမှ Irdeto ရဲ့ State-Of-The-အနုပညာ, Multi-အလွှာချဉ်းကပ်အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်ရေးယူနစ် (ECUs) ကာကွယ်ပေးသည်; IVI စနစ်များအပါအဝင်အရံပစ္စည်း; အစပိုင်းမှာ applications များအပေါင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့်ဒေတာအပါအဝင် software ကို; CAN ဘတ်စ်ကား, Ethernet နှင့်အနာဂတ်ဘတ်စ်ကားဗိသုကာအပါအဝင် In-မော်တော်ယာဉ်ကွန်ရက်များ, နှင့် Wi-Fi, Bluetooth စ V2X နှင့်အခြားသူများအပါအဝင်ဆက်သွယ်မှု။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Irdeto အမည်မသိ (သုညနေ့) အားနည်းချက်များ၏ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းပုံမှန်မဟုတ်သောမော်တော်ယာဉ်အပြုအမူကို detect ကြောင်းစက်-သင်ယူမှု-based နည်းပညာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါရလဒ်စားသုံးသူများအတွက်လုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံကပေးအဖြစ်မော်တော်ယာဉ်နှင့်အစိတျအပိုငျးထုတ်လုပ်သူများအတွက်အမှတ်တံဆိပ်ဂုဏ်သတင်းနှင့်ဝင်ငွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်, တိုက်ခိုက်ခဲ့၏မျက်နှာကိုအတွက်ရည်ရွယ်အဖြစ် run သောမော်တော်ယာဉ် software ဖြစ်ပါသည်။
Niels Haverkorn, Irdeto မှာချိတ်ဆက်ပို့ဆောင်ရေးမှ General Manager, ဆက်ပြောသည်: "အခုဆိုရင်စားသုံးသူကားကိုပိုမိုန်ဆောင်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်, အလားအလာ data တွေကိုခိုးယူ၏ခြိမ်းခြောက်မှုများအလွန်မှန်ကန်ဖြစ်ကြသည်။ ယနေ့ကြှနျုပျတို့လာမည့်တစက်မှကူးစက်သည့်ဒေတာကြားဖြတ်နှင့်နှောင့်အယှက်မဖြစ်နိုင်အောင် V2X ဆက်သွယ်ရေးလုံခြုံနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတစ်ဦးပြည့်စုံနှင့်အလုံခြုံဂေဟစနစ်, ဖန်တီးဖို့ ACCESS နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. နေကြသည်။ ဤအတိုင်းတာမရှိရင်လုံခြုံဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းယာဉ်မောင်းနှင့်ခရီးသည်များအတွက်အလားအလာထိခိုက်ရလဒ်များကိုနှင့်တကွ, ဂေဟစနစ်သို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်များပေးပို့ရန်တိုက်ခိုက်သူတွေကအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ "
ACCESS အဆင့် 1s, စတူဒီယို, ထုတ်လွှင့်, အကြောင်းအရာအခွင့်အရေးများပိုင်ရှင်တွေ, အတိုင်ပင်ခံ, အဥပဒေရေးရာအလုပ်အကိုင်, လိုင်စင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်ဆွဲဆောင်မှု In-ကားတစ်စီးန်ဆောင်မှုအမှန်တကယ်ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကိုလုပ်ကိုကူညီလူ့အဖွဲ့အစည်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်ငြ့်အရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု (DRM) နည်းပညာနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံပံ့ပိုးပေးစုဆောင်း။ အကြောင်းအရာကာကွယ်မှုစတူဒီယိုနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်မြင့်မားသောဦးစားပေးဖြစ်နေဆဲနှင့် ACCESS ကြိုးTM ကားများအတွက် မော်တော်ကား '' န်ဆောင်မှုဟာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု၏အဆုံးမှအဆုံးသို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုထောက်ပံ့နေဖြင့်လိုက်နာဖြစ်ကြောင်းသေချာ။ ACCESS ကားများအတွက် ACCESS ကြိုးတစ်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကိုသို့အားလုံးချိတ်ဆက်ဖျော်ဖြေရေး options များလွှမ်းခြုံနေတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။
အယ်ဒီတာများမှမှတ်ချက်: ACCESS နှင့် Irdeto မှာ၎င်းတို့၏ပူးတွဲဖြေရှင်းချက်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ကို CES 2019 (Las Vegas မှာဇန်နဝါရီလ 8-11, 2019) ။ သင်ဤမိတ်ဖက်အကြောင်းပိုမိုသိကျွမ်းသို့မဟုတ် CES စဉ်အတွင်းတစ်သရုပ်ပြကြည့်ဖို့လိုပါလျှင်, Faye Ratliff ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected]+ 44 207 486 4900 ။
ဝင်ရောက်ခွင့် CES2019 ချိတ်ဆက်ကားတစ်စီး irdeto လုံခွုံရေး SoftAtHome, MStar, CES2017 2019-01-08
ယခင်: ထုတ်လုပ်မှုအတွက် IP ကိုကျော် audio / ဗီဒီယိုလမ်းကြောင်း
နောက်တစ်ခု: ခရစ္စတိုဖာ Bair DC ကရုံးထဲမှာ Wilkinson Barker Knauer ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်